Global Alliance for Zimbabwe - HOW YOU CAN HELP
Become a MemberDonateContact	Home HOW YOU CAN HELP
HOW YOU CAN HELP Join or Make a DonationThere are two ways you can make a difference in Zimbabwe. Join the Global Alliance for Zimbabwe or make a donation to the Global Alliance for Zimbabwe Foundation. The Global Alliance for Zimbabwe
The Global Alliance for Zimbabwe is a 501(c)(6) non-profit organization of thought leaders, business leaders, diplomats, concerned individuals and the Zimbabwean Diaspora. Founded in 2011, the Global Alliance for Zimbabwe is chaired by Roy Bennett, the Deputy Minister of Agriculture in Exile and Treasurer General of the Movement for Democratic Change.The Global Alliance for Zimbabwe seeks to amass international pressure on Robert Mugabe and the ZANU-PF as a means to ensure non-violent, fair and free elections.
The Global Alliance for Zimbabwe FoundationThe Global Alliance for Zimbabwe Foundation is a private, 501(c)(3) non-profit organization founded by the Global Alliance for Zimbabwe to provide humanitarian aid to the Zimbabwean people most affected by Mugabe’s reign of terror. The Global Alliance for Zimbabwe Foundation works with non-governmental organizations to deliver much needed aid directly to the people of Zimbabwe.